Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Seychelles Hadda Waxay Ka Baxday Liiska Cas Ee UK
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Seychelles oo ka baxday Liiska Cas ee UK
Seychelles ayaa ka baxday liiska cas ee UK taasoo calaamad u ah tallaabada xigta ee dib -u -soo -kabashada dalxiiska.
Xafiiska Arrimaha Dibedda, Barwaaqo -Sooranka & Horumarinta ayaa kor u qaaday talooyinkiisa ku aaddan dhammaan safarrada aan muhiimka ahayn ee 47 meelood oo ay ku jiraan Seychelles.
Socotadu waxay awoodi doonaan inay caymis u helaan meeshii ay u socdeen, oo tallaalka hadda ka dib looma baahna inay qaataan tijaabooyinka PCR ama karantiilid.
Tani waxay kor u qaadeysaa meesha loo socdo iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada iyo la -hawlgalayaasha warshadaha safarka.
Laga bilaabo 4 subaxnimo GMT, Isniinta, Oktoobar 11, 2021, socotada UK, oo ah suuqa saddexaad ee dalxiiska ugu weyn ee Seychelles, ayaa laga yaabaa inay mar kale booqdaan jasiiradda Badweynta Hindiya iyadoo safarradu awood u leeyihiin inay caymis u helaan meesha loo socdo iyo tallaalka oo aan loo baahnayn si ay u qaataan tijaabooyinka PCR ama in lagu karantiilo hoteel la oggolaaday markay ku noqdaan guryahooda.
Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo -Sooranka & Horumarinta (FCDO) ayaa kor u qaaday talooyinkiisa ku aaddan dhammaan safarrada aan muhiimka ahayn ee 47 meelood oo ay ku jiraan Seychelles oo qayb ka ah nidaam la fududeeyay safar caalami ah kaas oo arkay beddelka nidaamka nalalka taraafikada oo leh hal liis cas, iyo hoos u dhigista shuruudaha imtixaanka ee u -qalmayaasha si buuxda loo tallaalay.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo dalxiiska ee Seychelles Sylvestre Radegonde ayaa soo dhoweeyay tallaabadan oo imaanaysa ka hor xilliga nuska iyo fasaxa jiilaalka. “Ka guurista liiska cas ee UK waa guul kale oo muhiim u ah soo kabashada warshadaha dalxiiska ee Seychelles, waxayna kor u qaadi doontaa meesha loo socdo iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada iyo la -hawlgalayaasha warshadaha socdaalka. Waan ku faraxsanahay inaan dib u soo dhaweyno booqdayaashii Ingiriiska, qoysaskii iyo malaayiintii malabka ahaa ee ku soo laabtay jasiiradeena quruxda badan. Boqortooyada Midowday (UK) waxay had iyo jeer u ahayd suuq xoog leh Seychelles, waxay gashay kaalinta saddexaad sannadka 2019 iyadoo ay soo booqdeen 29,872, waxaanan ku rajo weyn nahay in warkan weyn, aan dib u bilaabi doonno inaan ku aragno tiro aad u badan. Iyadoo la raacayo qawaaniinta caafimaadka iyo badbaadada ee ay qaateen hawlwadeennada dalxiiska iyo xarumo helay shahaado ammaan ah oo COVID-19 ah, booqdayaashayadu waxaa loo ballanqaaday fasax ammaan ah oo raaxo leh. ”
Soo booqdayaasha Seychelles waa inay halkan ku buuxi foomka oggolaanshaha safarka oo tusa caddaynta baaritaanka PCR -ga taban 72 saacadood ka hor safarka loo socdo.